အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Beat/Come/Die/First/Habit) - Myanmar Network
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Beat/Come/Die/First/Habit)
Posted by Language Republic on September 21, 2011 at 11:04 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
It beats me (ငါတော့နားမလည်နိုင်ဘူးကွာ)
You say it beats me when you cannot understand something.
(It beats me (ငါတော့နားမလည်နိုင်ဘူးကွာ) ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို နားမလည် တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။)
“It beats me why Jack stays with this firm. He could getamuch better job elsewhere.
(ဂျက်(ခ)(Jack)ဟာ ဘာ့ကြောင့် ဒီကုမဏီမှာ ဆက်နေတယ် ဆိုတာကို ငါတော့နားမလည်နိုင်ဘူးကွာ။ တခြားနေရာမှာဆိုရင် ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ရနိုင် ရဲ့သားနဲ့။)
“It beats me why Jim decided to work in the family factory. He could have gone to university.”
ဂျင်(မ)(Jim) ဟာ ဘာ့ကြောင့် မိသားစုစက်ရုံမှာ ၀င်ရောက်အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာလဲ ဆိုတာကို ငါတော့ နားမလည် နိုင်ဘူးကွာ။ တက္ကသိုလ် သွားနိုင်ရဲ့သားနဲ့။)
Come off it! (သွားစမ်းပါ/လုပ်မနေစမ်းပါနဲ့)
You say come off it! to someone ,informally and rather rudely , when you think that they have said something that
You disagree with or that you think is untrue or stupid:
(သင့်အနေနဲ့ သဘောမတူတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု (သို့) မမှန်ဘူး (သို့) အဓိပါယ်မရှိဘူး လို့ထင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြောလာတဲ့အခါ ထိုသူအား come off it! (သွားစမ်းပါ/လုပ်မနေစမ်းပါနဲ့!) လို့ပြောပါတယ်။ ရင်းနှီးပြီး သိပ်မယဉ်ကျေးလှတဲ့ အသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
“I think Dad’s mean not to give me the money for that dress.”
(အဲဒီအကျီ င်္ ၀ယ်ဖို့အတွက် အဖေပိုက်ဆံ မပေးတာကတော့ ကပ်စေးနဲလွန်းတယ်လို့ ငါထင်တယ်။)
“Come off it, Meg! He gave you money for clothes only yesterday.”
(လုပ်မနေစမ်းပါနဲ့မဂ်(ဂ)ရာ! အ၀တ်အစားအတွက် ပိုက်ဆံကို မနေ့ကပဲ မင်းကို အဖေပေးတယ်လေ။)
“I hope our team wins today.”
(ဒီနေ့ ငါတို့အသင်း နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်)
“Come off it! Three of our best players are injured. We’re bound to lose.
(သွားစမ်းပါ! ငါတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အားကစားသမား သုံးယောက်က ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရထားတယ် ငါတို့ရှုံးမှာသေချာနေပါတယ်။)
I’m dying for (………….. ချင်လိုက်တာတစ်ပိုင်းကိုသေနေတာပဲ)
You say that you are dying for something in an informal context if you want it very much.
(ရင်းနှီးတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ အရာ တစ်ခုခုကို အရမ်း လိုချင်တဲ့အခါ I’m dying for…..(……….ချင်လိုက်တာတစ်ပိုင်းကိုသေနေတာပဲ။) ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုပါတယ်။)
“It’s very hot and I’m dying foraglass of cold water.” (ပူလိုက်တာ၊ရေအေးအေးလေး တစ်ခွက်လောက် သောက်ချင်လိုက်တာတစ်ပိုင်းကိုသေနေတာပဲ။)
“I’m dying for something to eat. I haven’t eaten since breakfast. (တစ်ခုခု စားချင်လိုက်တာတစ်ပိုင်းကိုသေနေတာပဲ။ မနက်စောစောစာ စားပြီးကတည်းက ဘာမှမစားရသေးဘူး။)
First things first (အရေးကြီးတာ အရင်လုပ်ရအောင်)
You say first things first to show that what you think is the most important thing should be done first before anything else:
(first things first (အရေးကြီးတာ အရင်လုပ်ရအောင်) ကို သင့်အနေနှင့် အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို တစ်ခြားကိစ္စ တွေထက် အရင်ဦးဆုံးလုပ်ရမယ်လို့ ပြောချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။)
We'vealot to do this morning, but first things first. Let's open the mail.
(ငါတို့ ဒီမနက်လုပ်စရာအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတာ အရင်လုပ်ရအောင်။ စာတွေ ဖောက်ရအောင်။)
The police will want to investigate the cause of the accident, but first things first. We must attend to the injured.
(ရဲတွေ့တော့ မတော်တဆထိခိုက်မှု ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို စုံးစမ်းချင်မှာပဲ၊ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတာ အရင်လုပ်ရအောင်။ ဒါဏ်ရာရထားတဲ့လူတွေကို ပြုစုရအောင်)
Why break the habit ofalifetime? (တစ်သက်လုံးလုပ်လာတဲ့အကျင့် အခုမှ ဘာလို့ပျောက်မှာလဲ?)
You say why break the habit ifalifetime? as ratherarude, disapproving comment about someone who is doing something, usually something annoying or unpleasant, that they are in the habit of doing:
(တစ်သက်လုံးလုပ်လာတဲ့အကျင့် အခုမှ ဘာလို့ပျောက်မှာလဲ? (why break the habit ofalifetime?) ကို လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အကျင့်အတိုင်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ (သို့) မနှစ်သက်စရာ ကိစ္စတစ်ခုခုကို လုပ်နေတဲ့အခါ ထိုသူကို ရည်ရွယ်ပြီးပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ မယဉ်ကျေးတဲ့အပြင် သဘောမကျကြောင်းကိုပါ ဖော်ပြသော စကား ဖြစ်ပါတယ်။)
'We all bought John drinks but he left without buying us any.'
(ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ဂျွန် (John) ကို အရက်ဝယ်တိုက်ပေမယ့် သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ဘာမှဝယ်မတိုက်ဘဲ ပြန်သွားတယ်
Why break the habit ofalifetime? John is too mean to buy anyoneadrink.'
(တစ်သက်လုံးလုပ်လာတဲ့အကျင့် အခုမှ ဘာလို့ပျောက်မလဲ။ ဂျွန်(John) က တစ်ခြားသူတွေကို အရက်ဝယ်တိုက်ဖို့ ကပ်စေးနည်း လွန်းတယ်)
'I'd like to go to the beach but Sue is insisting on going shopping.'
(ကျွန်မက ပင်လယ်ကမ်းခြေကို သွားချင်ပေမယ့်၊ ဆူး (Sue) ကတော့ဈေးသွားဝယ်ထွက်ဖို့ကိုပဲ ဇွတ်ပြောနေတယ်)
Why break the habit ofalifetime? All Sue ever wants to do on holiday is to go round the shops.'
(တစ်သက်လုံးလုပ်လာတဲ့အကျင့် အခုမှ ဘာလို့ပျောက်မလဲ? ပိတ်ရက်မှာ ဆူး(Sue) အမြဲတမ်းလုပ်ချင်တာကတော့ ဈေးဝယ် ထွက်ဖို့ပဲ)
Permalink Reply by Done Done on September 21, 2011 at 13:37
ပထမသင်ခန်းစာတုန်းကတည်းက ကူးယူထားတာမို့ အခုတကြိမ်လဲ ကူးသွားပါတယ်
နောက်လဲ ကူးယူထားမှာဆိုတော့ ခွင့်ပြုပါလို့ ....
Permalink Reply by May Zon Aung on September 21, 2011 at 16:54
Permalink Reply by minkoko on September 21, 2011 at 17:23
သင်တန်းတွေတက်မလို့ အကြောင်းအမျိုး2ကြောင့် မတက်ဖြစ်သေးပါဘူး ခုချိန်ထိပေါ့
Permalink Reply by 1b1zedxcnwez5 on September 22, 2011 at 11:33
thanks for knowledge...
Permalink Reply by soethu on September 22, 2011 at 11:41
“I’m dying for need grammar guide book!!!!!
Permalink Reply by 1qai17x49qy02 on September 22, 2011 at 12:04
Thanks for knowledge sharing.I hope,next time also give mealots of knowledge sharing.
Permalink Reply by Queen on September 22, 2011 at 12:07
ကျေးဇူးပါနော် တကယ်အကျိူးရှိပါတယ် ဒီ့ ထက်မကအောင်မြင်ပါစေး)
Permalink Reply by Aungtinwin on September 22, 2011 at 12:09
Permalink Reply by 1z32bac4b8r2j on September 22, 2011 at 13:59
Permalink Reply by Naw Marie on September 22, 2011 at 14:26
Permalink Reply by koyinau on September 22, 2011 at 14:55
Thank for sharing knowledge with explanation.
looking forward to learning the next
Permalink Reply by coe coe on September 22, 2011 at 15:43
Awaiting for your next port................